श्रीमतीलाई बिग्रीन नदिन ध्यान दिनुस यी कुराहरुमा: विवाहितले पढ्नै पर्ने ! – AB Sansar
October 21, 2020 adminLeaveaComment on श्रीमतीलाई बिग्रीन नदिन ध्यान दिनुस यी कुराहरुमा: विवाहितले पढ्नै पर्ने !
– तपाईको फोनको श्रीमतीले कस्तो रेस्पोन्स गर्छिन् । त्यसप्रति पनि तपाई सचेत हुनुपर्छ । तपाईले फोन गर्दा उनले तरिकाले बोलेकी छिन् ? बोल्दा बोल्दै एकासी झर्किने, रिसाउने गर्छिन् भने पनि शंका गर्ने ठाउँ उत्पन्न हुन्छ । कहिलेकाहीं श्रीमतीलाई अभावमा पनि बाँच्न सिकाउनुहोस् । तर, त्यसो भन्दैमा धेरै कष्ट भने दिनुहुँदै । धेरै माया गरेर सबै पैसा श्रीमतीलाई नै पठाउनुहुन्छ त्यसको हिसाब किताब केही राख्नुहुन्न माग्नुहुन्न भने कहिलेकाहीं त्यो पैसा गलत काममा पनि प्रयोग हुन सक्छ ।